Soo degso F-111 PIG HUD Mashruuca Wadida Wareejinta FSX & P3D - Rikoooo
F-111 PIG HUD Mashruuca Wadida Wareejinta FSX & P3D
downloads 24 389
F-111 PIG HUD MASHRUUC-HALIS-WADAAGGA / Xaaladda wacyiga xaladda FSX or P3D. Diyaarad dhameystiran! Waxaa suurogal ah in NAV Pnl ugu horumarsan lagu heli karo bilaash ahaan. Nooca gaarka ah wuxuu riixaa jilitaanka heerkiisa ugu sarreeya. Waxaad helaysaa farxad aan la dafiri karin si aad ugu duusho duqeynta cimilada oo idil oo leh baalal joomatari oo isbeddelaya. Waxaa ka mid ah dhawaqyada caadada u ah iyo saameyno gaar ah oo muuqda (oo ay ku jiraan daadinta bam!)
WAA INAAD AKHRI DIIWAAN THE : Waxaa jira darsin of pages buugan, waraaqo iyo tilmaan ka mid ah la xirmadan, DoCS waxaa loo sameeyey si aad u bartaan sida loo xakameeyo hawlaha kala duwan ee diyaarad this.